30 Jolay 2020 - FJKM Québec - Canada
30 juillet 2020 by FJKM-QUEBEC
EKSODOSY 5 : 1-17
5:1 Ary rehefa afaka izany, i Mosesy sy i Arona dia nankao amin’i Farao ka niteny taminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitr’i Israely: Alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho Ahy any an’efitra.
5:2 Fa hoy i Farao: Iza moa Jehovah, no hekeko teny handefasako an’i Israely? Tsy fantatro izay Jehovah, ka tsy halefako i Israely.
5:3 Ary hoy izy roa lahy: Andriamanitry ny Hebreo efa nihaona taminay; koa trarantitra ianao, aoka handeha lalan-kateloana any an’efitra izahay hamono zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehovah Andriamanitray; fandrao Izy hamely anay amin’ny areti-mandringana, na amin’ny sabatra.
5:4 Ary hoy ny mpanjakan’i Egypta taminy: Nahoana ianareo, ry i Mosesy sy i Arona. no manaketraka ny olona amin’ny asany? Mandehana any amin’ny fanompoanareo mafy.
5:5 Ary hoy koa i Farao: Indro, efa maro ankehitriny ny olona eto amin’ny tany, ka ianareo mampitsahatra azy amin’ny fanompoany mafy.
5:6 Ary tamin’izany andro izany i Farao nandidy ny mpampiasa ny olona mbamin’ny mpifehy azy ka nanao hoe:
5:7 Aza omenareo mololo hanaovana biriky tahaka ny teo aloha intsony ny olona; fa izy ihany no aoka handeha hanangona mololo ho azy.
5:8 Kanefa ny isan’ny biriky izay fanaony teo aloha dia mbola hampanaovinareo azy ihany, fa aza ahenanareo; fa malaina izy, koa izany no itarainany hoe: Aoka izahay handeha hamono zavatra hatao fanatitra ho an’Andriamanitray.
5:9 Hamafiso ny fanompoan’ny olona mba hifotorany amin’izany, fa aza avela hihaino izay lainga foana izy.
5:10 Dia nivoaka ny mpampiasa ny olona mbamin’ny mpifehy azy ka niteny tamin’ny olona nanao hoe: Izao no lazain’i Farao: Izaho tsy mba hanome mololo anareo intsony;
5:11 fa mandehana ianareo ka manangona mololo any amin’izay hahitanareo, satria tsy hahena ny fanompoanareo na dia kely akory aza.
5:12 Dia niely eran’ny tany Egypta rehetra ny olona mba hifako vodivary ho solon’ny mololo.
5:13 Ary ny mpampiasa nandodona azy ka nanao hoe: Vitao ny asanareo, izay anjara fanompoana isan’andro, tahaka ny fony mbola nisy mololo ihany.
5:14 Ary ny mpifehy ny Zanak’i Israely, izay notendren’ny mpampiasa avy amin’i Farao mba hifehy azy, dia nokapohina ka nanontaniana hoe: Ahoana no tsy nahavitanareo ny anjaranareo tamin’ny fanaovana ny biriky omaly sy androany, tahaka ny teo aloha?
5:15 Dia nankao amin’i Farao ny mpifehy ny Zanak’i Israely ka nitaraina taminy hoe: Nahoana no manao toy izany amin’ny mpanomponao ianao?
5:16 Tsy omena mololo tsinona izahay mpanomponao, nefa mbola asaina manao biriky ihany; ary, indreto, izahay mpanomponao no kapohina, ka manota ny vahoakanao.
5:17 Fa hoy i Farao: Malaina dia malaina ianareo, ka izany no anaovanareo hoe: Aoka handeha izahay hamono zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehovah.
1-Mikendry fanompoana Azy
« Alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho Ahy any anefitra » (and1)
Raha nirahina ho any amin’i Farao i Mosesy sy Arona hangataka azy mba handefa ny Zanak’Israely , dia mazava tsara ny antony fa « hanao andro firavoravoana » ho an’i Jehovah. Sarotiny tamin’izany Andriamanitra satria ny zanany dia tsy maintsy manompo Azy (4.23) ary izany no antony hanafahany azy amin’ny fanandevozana . Noho izany , ny olona afaka no manompo an’Andriamanitra , fa tsy olona mbola voageja , ary mbola hita izany tamin’ny nanomezany an’i Jesoa Kristy nanafaka antsika tamin’ny fahotana , mba hahazoantsika manompo Azy ankalalahana .
2-Mampitombo ny fahatezeran’ny tsy mino
« Hamafio ny fanompoan’ny olona mba hifotorany amin’izany , fa aza avela hihaino izay lainga foana » (and9) . Didy navoakan’ i Farao nampitaina tamin’ny mpampiasa sy ny mpifehy hanamafisana ny fampahoriana taorian’ny fangatahana nataon’i Mosesy sy Arona taminy hanafahana ny Zanak’Israely tsy ho andevo intsony fa hanompo an’Andriamanitra . Vao mainka nanamafy ny fony i Farao ka nampahory ny vahoaka noho ny fandrenesany ny fanafahana ataon’Andriamanitra . Mampitombo ny fahatezeran’ny ratsy fanahy ny fandrenesany ny fanafahana ataon’Andriamanitra . Toy izany ihany koa , rehefa vita ny famonjena sy fanafahana nataon’i Jesoa Kristy dia vao mainka tezitra ny devoly mba hisehoan’ny herin’Andriamanitra .
Olona afaka ianao , inona ny fanompoana ataonao amin’Andriamanitra ?